Wararka Suuqa Maanta: Xavi oo Qabanaya Shaqada Tabaranimo ee Barcelona, Xiisaha Kalvin Phillips iyo Qodobo kale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Xavi oo Qabanaya Shaqada Tabaranimo ee Barcelona, Xiisaha Kalvin...
Wararka Suuqa Maanta: Xavi oo Qabanaya Shaqada Tabaranimo ee Barcelona, Xiisaha Kalvin Phillips iyo Qodobo kale
Liverpool ayaa kula biirtay Manchester United dagaalka ay kula soo saxiixaneyso ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leeds United iyo xulka England Kalvin Phillips, oo 25 jir ah, heshiis 60 milyan ginni ah. (Dailystar)
Manchester United ayaa diyaar u ah in ciyaaryahanka khadka dhexe ee France Paul Pogba uu baxo marka uu qandaraaskiisu dhamaado xagaaga soo aadan, waxaana ay aaminsan yihiin inay faa’iido badan u leedahay inay 28 jirkaan sii hayaan ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka halkii ay iibin lahaayeen Janaayo. (ESPN)
Paris St-Germain ayaa ku biirtay tartanka loogu jiro saxiixa garabka Leeds Raphinha, oo 24 jir ah, ka dib markii ay tixraac cajiib ah ka heshay saaxiibkiis Brazil ee Neymar. (Teamtalk)
Liverpool ayaa ka mid ah kooxaha soo bandhigay xiisaha ay u qabaan saxiixa xiddiga khadka dhexe ee England Jude Bellingham, oo 18 jir ah, kana tirsan Borussia Dortmund . (Sun)
Barcelona ayaa u soo bandhigtay ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe Xavi, kaasoo ah tababaraha kooxda Al Sadd ee Qatar, doorka macalinimo ee kooxda ka dib markii kooxda Nou Camp ay ceyrisay Ronald Koeman. (Goal)
Marc Overmars ayaa ka tagi doona Ajax si uu u noqdo agaasimaha kubada cagta Newcastle bisha Janaayo ama Febraayo. (Telegraaf)
Manchester United ayaa ku qasbanaan doonta inay siiso tababare Ole Gunnar Solskjaer adduun dhan 7.5 milyan oo gini haddii ay haatan ceyriyaan. (Thesun)
Ciyaartoyda Manchester United ayaa ku soo jeestay Solskjaer intii lagu guda jiray qolka labiska. (Thetimes)
Weeraryahanka Portugal Cristiano Ronaldo, oo 36 jir ah, ayaa isku dayay inuu isku soo ururiyo qolka labiska ee Manchester United , wuxuuna ku dhiirigeliyay asxaabtiisa inay taageeraan Solskjaer. (Manchester Evening News)
Newcastle ayaa indha-indheeye u daawatay xiddiga khadka dhexe ee Bayer Leverkusen ee Florian Wirtz, oo 18 jir ah, xilli xiddiga Jarmalka uu ciyaarayay kulankii Cologne Axadii. (Bild)
Borussia Dortmund ayaa la xiriirtay Chelsea mustaqbalka weeraryahanka Jarmalka Timo Werner, 25, garabka Ingariiska Callum Hudson-Odoi, 20, iyo garabka USA Christian Pulisic, 23. (Teamtalk).
Chelsea ayaa isha ku haysa inay u dhaqaaqdo saxiixa daafaca reer France ee Sevilla Jules Kounde iyo sidoo kale daafaca dhexe ee Juventus iyo Netherlands Matthijs de Ligt, oo labaduba 22 jir ah, iyagoo ka cabsi qaba inay kooxda ka tagaan daafaca Jarmalka Antonio Rudiger, 28, iyo Denmark Andreas Christensen. (EurosportMetro)
Liverpool ayaa qorshaynaysa in ay u isticmaasho lacag ay ku iibiso Mohamed Salah, oo 29 jir ah, si uu u noqdo dakhligooda ugu badan, laakiin wararka sheegaya in weeraryahanka Masar uu dalbanayo 500,000 oo gini todobaadkii si uu u saxiixo qandaraas cusub. (Teamtalk)
Michael Edwards ayaa qorsheynaya inuu ka tago doorkiisa agaasimaha isboortiga ee Liverpool dhamaadka xilli ciyaareedkan, 41 jirkaan reer England ma heysto shaqo cusub. (FootballInsider 247)
Agaasimaha Fiorentina Joe Barone ayaan meesha ka saarin inuu iibin doono weeraryahanka Serbia Dusan Vlahovic bisha Janaayo, iyadoo 21 jirkaan uusan dooneynin inuu qandaraaska u kordhiyo kooxda Serie A wixii ka dambeeya June 2023. (Football Italia).
Barcelona ayaa wax ka weydiisay daafaca dambeedka midig ee reer Brazil iyo kooxda Monaco Caio Henrique, oo 24 jir ah. (AS ).
Previous articleSheekh Shaakir oo shaaca ka qaaday sababta ay uga baxeen Guriceel
Next articleChelsea oo doonaysa inay la soo wareegto da’yar ka tirsan kooxda West Bromwich Albion
Liverpool oo diyaar u ah in ay Mohamed Salah ka dhigto...
dalkaan_2ujpzr - October 28, 2021 0
Liverpool ayaa soo bandhigtay qorshe ay ku doonayso inay Mohamed Salah kaga dhigto ciyaartoyga ugu dakhliga badan, sida lagu sheegay warbixintii ugu danbeesay. ...
Mareykanka: Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay weerar baabuur ah oo lagu...
San Marino 0-10 England, Saddexda Libaax oo Xasuuq u geestay Xulka...
Sawirro: Falcelin caro leh oo ka dhalatay dooro ay Amisom siiyeen...
Juventus oo qarka u saaran inay ku dhawaaqdo heshiiska Cusub ee...
Tababaraha Aston Villa Dean Smith oo shaqada laga ceyriyay ka dib...
Manchester City oo go’an adag kasoo saartay Mustaqbalka Xidiga Raheem Sterling